नेपाली कांग्रेसका युवा नेता संघिय सभापति काभ्रेका अत्याधिक लोकप्रिय नेता बाल काग्रेसको नेतृत्व देखि सफल मेयर हुनुभएका कुशल संगठक महेश खरेल गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचखाल नगरपालिकाबाट मेयरमा निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट उम्मेद्धवारी दिएका खरेल निर्वाचित भएसँगै नगरपालिकाको विकास निर्माणमा समर्पित हुनुभएको हो ।
उहाँको कार्यको मुल्याङकनले बागमती प्रदेश सरकारबाट उत्कृष्ट मेयरको उपाधि पाउनुभएको छ । एम.वि.ए. सकेर लामो समय अमेरिकामा व्यवसायमा आवद्ध भएका उहाँ निर्वाचित भएपश्चात् उहाँको काम गर्ने शैलीकै कारण नगरपालिकाका जनताहरुको मन मनमा बस्न सफल हुनुभएको पाइन्छ । उहाँ खरेलसँग पाँचखाल नगरपालिकाको विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा भएको परिर्वतनको विषयमा विद्युत संसार साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक राम प्रसाद पौडेलले गरेको संवाद संक्षिप्तमा:
महेश खरेल/प्रमुख, पाँचखाल नगरपालिका
देशमा राजनैतिक चुनावी माहोल कसरी अगाडि बढेको छ ?
देश यतिखेर स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुदै गएको छ । आफू स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले आउँदो निर्वाचनका लागि तयारी गर्दैछौ ।
स्थानीय सरकार र आगामी स्थानीय निर्वाचन कसरी अगाडि बढ्ला ?
तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा हामी राजनैतिक दलहरूसँगै सारा नेपालीहरू ढुक्क छौ । यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरुको व्यक्तिहरू भन्दा पनि सचेत जनताले एक असल जनप्रतिनिधि चुन्ने छन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।
तपाई एक जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ आफ्ना क्षेत्रमा के कसरी काम कार्य अगाडि बढाउँदै आउनु भएको छ ?
केही व्यक्ति राजनीति गर्न आफू आर्थिक रूपले सक्षम भएमा मात्र राजनीतिमा आउनु पर्दछ तर राजनीतिलाई सामाजिक सेवा ठानेर लाग्नु पर्दछ । जो कोहीले पनि राजनीतिलाई आफ्नो पेसा बनाउन हुँदैन । म निर्वाचित भएदेखि सोही अनुरुपमा आफ्ना क्षेत्रमा काम कार्य गर्दै आएको छु । हाम्रो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढिरहेकै छन् । खासगरी खानेपानीलाई प्राथमिकताका साथ हेर्दै प्रदेश तथा संघ सरकारको सहकार्यमा पानीका मुहानहरु भएका ठाउँमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र नभएको ठाउँमा डिप बोरिङ गरेर भएतापनि खानेपानीमा सहजता ल्याएका छाै ।
यो सँगै एडीबी र नगरविकास कोषको सहयोगमा दुई अर्ब २५ करोडको लागतको साउथ एशिया कै सबैभन्दा ठूलो स्मलटाउन वाटर प्रोजेक्ट पाँचखालमा केन्द्रिय सरकारले नै टेन्डर लगाएर भइरहेको काम हाल सम्म ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । अबको छ महिनामा घर घरमा पानी पु¥याउने लक्ष्य हाम्रो छ । त्यसैगरी हामीले नेपाल सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक पालिकामा कालोपत्रे सडक पु¥याउने भन्नेमा हामीले प्रत्येक वडामा मात्र होइन पालिकाका प्रमुख मठमन्दिर, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय लगायत मुख्य ठाउँमा कालोपत्रे गर्ने काम गरेका छौ । यी बाटो छ मिटर भन्दा ठूला छन् । यो सँगै हाम्रो क्षेत्रमा पार्किङ गर्न विभिन्न स्थानमा जग्गाहरू तोकिएका छन् । नगरपालिका भित्र घर बनाउँदा विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गरेका छौ सेफ्टी ट्याङ्की अनिर्वायसँगै खेतियोग्य जमिज जोगाउनका निम्ति खेतियोग्य क्षेत्रमा घर तथा भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउन कानुन पास गरिसकेका छाै ।
पाँचखाल नगरपालिकामा स्मार्ट सिटिको प्रावधान ल्याएका छौ । यसका लागि निफ्रासँग साढे दुई अर्ब लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसका लागि सिंगापुरको कम्पनीले डिपिआर तयार पार्ने क्रममा छ भने अमेरिकाको कम्पनीले विभिन्न कोणबाट अध्ययन अगाडि बढाएको छ । यस्ता स्मार्ट सिटी पाँचखालमा पाँचवटा बनाउने अभियानमा हामी छौ । यसका लागि सरकारको आफ्नो लगानी पनि छैन बैकले लगानी गर्दछ र पछि बैंकले आफ्नो लगानी सोही ठाउँबाट उठाउने गरी कार्ययोजना बनाउने क्रममा हामी छौ ।
यो सँगै उद्योगधन्दाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने देखि, शैक्षिक क्षेत्र सुधार सम्मका कामहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कोभिड समय देखि नै उत्कृष्ठ काम गरेका छौ । सरकारले छुट्याएको हाम्रो पारिश्रमीकले एम्बुलेन्स देखि दमकल खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएका छौ ।
सीमित साधनहरु प्रयोग गरेर असिमित आवश्यकता पुरा गर्न ठूलो भुमिका खेल्नुभयो यस्तो प्रेरणा कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो ?
मेरो बुबा राजेन्द्र खरेल जसले नैतिकताको राजनीति गर्नु भयो उहाँले शिक्षा राज्यमन्त्री भइरहँदा कुनैपनि विवाद नआउने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मिलेर पार्टीको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदैगर्दा ठूलो अनुभव बटुलेको छु । एमविए सकेर अमेरिकामा व्यवसायमा आवद्ध हुदै गर्दा यिनै परिस्थितिबाट प्रेरणा पाएका छु । म आफुलाई व्यक्तिगत सुविधा भन्दा बाहिर गएर आम पाँचखालका आम जनताहरुको सेवा गर्न आएका छु । म आफुले सरकारबाट पाएका सेवा सुविधा पनि समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई दिने गरेको छु । यसैले राजनीतिमा लिन आएको होइन केही दिन आएको हुँ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
हाम्रो नगरपालिका भित्रका ६० वर्ष भन्दा माथिका बुबा आमा जसको दातमा समस्या छ । उहाँहरुको नि–शुल्क दात फेरिदिएका छौ यो सँगै विभिन्न अस्पतालहरुको सहकार्यमा आखाँको मोतिविन्दुका विरामीहरुलाई निःशुल्क अपरेशन गरिदिने गर्भवती महिलाहरुको अल्ट्रासाउड गर्ने कोरोना भाइरस महामारीका अवस्थामा पनि हामीले नेपाल कै उत्कृष्ट आइसोलेशन बनाएर महामारी प्रति डटेर लागेका थियौ ।
शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पाँचखालका प्रायः विद्यालयका भवनहरु पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हामीले सरकारी विद्यालयलाई पनि नीजि क्षेत्रको स्तरमा कसरी लान सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौ । काठमाडांै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर कृषि विषयमा पढाई भइरहेको छ भने मदन भण्डारी युनिभर्सिटीका लागि १२ हजार रोपनी जग्गा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो सँगै प्रदेश सरकारको सहकार्यमा नगरपालिका भित्र प्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । जसअन्तगर्त एक हजार भन्दा धेरै हाते ट्याक्ट, मौरीका घार किसानलाई अनुदान स्वरुप दिएका छांै । अर्गानिक तरकारी उत्पादनका लागि हामीले विभिन्न संघ संस्थाको सहकार्यमा किसानहरुलाई तालिम दिदंै आएका छौ यसको रिजल्ट आगामी दिनमा आउने छ ।
म निवार्चित हुँदै गर्दा पाँचखालमा काठमाडांै शहरको विकल्पको रुपमा पाँचवटा स्मार्टसिटीको अवधारण ल्याउने योजना बनाएको थिए । जुन पि–२० भिजन हो अहिले एउटा सिटीमा ५० हजार मानिसको बसोवास छ भने मेरो भिजन अनुसार पाँच ठाउँमा ५० हजारका दरले दुईलाख ५० हजार मानिस जहाँ सुविधा सम्पन्न सिटी अर्थात ग्रिन सिटी हुनेछ । यस्ता विषयमा सरकार देखि पाचँखालका आम राजनैतिक दल तथा जनताहरुको सहकार्यमा हामी समाजवाद तर्फ लम्कन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।